Shiinaha 180cm gabar jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi qaangaar jinsi doll dolls doll dol-ultra-realistic dolls dolls dolls for women saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shaoman
180cm china wiil jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi qaangaar jinsi dolls dolls doll dolls dolls dolls dolls for women
Dhererka 175cm Miisaanka 58kg Dhexda 81cm
Sinta 97cm Cabbirka kabaha 48 Bust 100cm
Lug 92cm Cagta 29cm Luqunta 30cm
Guska 16.5cm Dhererka gacanta 16.5cm Dhererka gacanta 52cm
Ballaca garabka 49cm Dhererka bowdada 86cm Cabbirka baakadka 160X50X35 cm
Faa'iidooyinka caruusadda galmada silikoon adag
1.100% Waxyaabaha aan sunta aheyn ee Caafimaadka. Waxaa cadeeyay ROHS, REACH iyo FDA.
2. Siiliko jilicsan oo Fiican Siilka Siilka.
3. Aqbal amarka yar iyo OEM.
4. Sii Qiimo Tartan.
5. Si fudud loo isticmaalo loona shaqeeyo.
6. Adeeg lagu kalsoonaan karo oo tayo sare leh
7.Si kasta oo aad u jeceshahay
8, Wejiga qurxoon waxaa farshaxan ku sameeyay farshaxan yahan caan ah.
Marwada waxay soo bandhigtay rag badan raaxeysiga ka badan wixii kale ee la gelinayo. Markaad dhex gasho marwadan. Diyaar u noqo inaad ku qanciso qanacsanaanta galmada heerarka cusub iyo kuwa xiisaha leh.
Ogsoonow: Hubso inaad isticmaasho saliid ku filan si aad ugu oggolaato adeegsiga raaxo leh iyo inaad ka hortagto khilaaf kaas oo sababi kara cuncun maqaarka ah.
Ka dib iibintu waxay u adeegtaa ku saabsan doll dhab ah oo jinsi ah:
1. Doll kasta noloshiisa shaqo waa 5 sano. Haddii caruusadu jaban tahay 5 sano, markaa waxaan ku siin karnaa biyaha koollada gaarka ah si aad u dayactirto, waxaan ku siin doonnaa fiidiyowga tiknoolajiyada dayactirka si aan kuu baro sida loo sameeyo. Laakiin adigu waxaad bixisaa kharashka dhoofinta.
2.Bashi kasta waxaan ku siineynaa hal nadiifiye nadiif ah oo nadiif ah.
3.Pls waxay xusayaan inaysan xiran karin dharka midabka madow ee caruusadaha, waad sameyn kartaa waadna ku nadiifin kartaa jelka qubeyska. oo fadlan tijaabi midabka dharka aad iibsato ka hor intaadan isticmaalin.
4. Pls kala xiriir qiimaha cusub, iyo tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan caruusadda.
Dayactirka: Miyaan siin karaa galmada jirka oo buuxda caruusad maydhasho?
Haddii caruusadaadu leedahay faddarayn yar ka dibna si fudud ugu nadiifi aagga tuwaal qoyan (ku tali biyaha) Haddii ay aaggu aad u faddaraysan yihiin, isticmaal saabuunta saabuunta ama saabuunta jirka. Sidoo kale waa suurtagal in la siiyo caruusaddaada qubeyska, hase yeeshee iska ilaali madaxa iyo qaybaha wadajirka ah ee jirka. Kaliya laga soo bilaabo dhexda ilaa hoos ayaa lagula talinayaa. Ha ku dul dhigin caruusadahaaga biyo hoostooda.
Hore: Dabacsanaanta Silicone Jacaylka dhabta ah ee Ragga Ragga Qaangaarka ah ee Carruurta Qaangaarka ah ee loogu talagalay Dumarka Galmada
Xiga: 140cm silikon nin doll nolol nololeedkeedu le'eg yahay cabbirka galmada ee dadka waaweyn ee loogu talagalay khaniisiinta wiilka silicone ee caruusadda galmada ee Haweenka
140cm silikoon nin doll nolol nolol nool adu ...